ဆေးရုံမှအိမ်ပြန်ခွင့် ရပါပြီဟု ပရိတ်သတ်တွေကို ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်းပြောပြလာတဲ့ ပရဟိတမင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ – CharTake
chartake | November 7, 2020 | Cele News | No Comments
Fighting အသင့် ! အသင့် ! Fighting
အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျော်နဲ့ထွန်း အိမ်ပြန်ခွင့် ရပါပြီခင်ဗျား။
ကိုဗစ် ကူးဆက်မှုကြောင့် ရက်ပေါင်း (၁၈) ရက်တိတိ ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံခဲ့ရပါသည်။ ကုသပေးခဲ့ကြသော ဆရာဝန်၊ဆရာ ဝန်မများ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့်တကွ ပြင်ပမှ ကျွန်တော်တို့အတွက် အဟာရ ဒါနပြုကြသော အလှူရှင် အပေါင်းတို့နှင့်
အားပေးနှစ်သိမ့် မေတ္တာပို့ကြသော ညီ/ညီမငယ် အနုပညာရှင်များ ၊ ပရဟိတ သမားများ၊မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများ၊ ပြည်သူလူထု အပေါင်းအပြင် နေ့စဉ်ယနေ့တိုင် ဆေးရုံတက်သည်မှ အစပြု၍ မေတ္တာဓါတ် ပို့လွှတ်ပေးနေကြသော ကျေးဇူးရှင် ဆရာတော်ဘုရား အပေါင်းတို့အား ရင်ထဲ နှလုံးသားထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကာ သာဓု သာဓု သာဓုဟု ခေါ်ဆိုလိုက်ပါသည်။
အထူးအားဖြင့် ကျွန်တော့်အား သွေးရည်ကြည် လှူဒါန်းလိုက်သော မမြင် လိုက်ရသည့် အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်ပဋ္ဋာန်းဆက် ( နှစ်ဦး ) အားလည်း အထူး သာဓု သာဓု သာဓုဟု ခေါ်ဆိုလိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော့်မွေးနေ့အတွက် ဆေးရုံသို့ ပို့ပေးကြသော အမှတ်တရ မွေးနေ့ကိတ်များ၊ ပန်းစည်းများ၊ မွေးနေ့ မေတ္တာစကားများ Fighting Group များအားလုံး ကို ကျွန်တော်တို့ နေအိမ်အ သီးသီးတွင် တစ်ပါတ်နား၍ ဆေးရုံ၌ ပြန်လည် ဆေးစစ်ချက် ယူပြီးချိန် တစ်လခန့်အကြာတွင် ပရဟိတ စိတ်ဓါတ်သစ်၊ အားမာန်သစ်တို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ( ကျော် + ထွန်း) တို့သည် လောကကြီးအတွက် အသင့် “FIGHTING ” ပါဟု……..။
ယနေ့ စနေနေ့(၇-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဝေဘာဂီဆေးရုံမှ နေအိမ် သို့ စတင်ရွေ့ပါတော့မည်။ ကျော်သူ၊ ထွန်းက်ိုကို ။